Munaasabada Xuska Aas Aaska Booliska Maxaa ku Cusbaa Sanadkaan - Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Munaasabada Xuska Aas Aaska Booliska Maxaa ku Cusbaa Sanadkaan - Warbixin
Muqdisho (KON) Inkastoo sanadkasta xusweyn loo dhigi jiray aas aaska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa hadana sanadkaan waxaa la sheegay in uu ka duwanaa xuska ciidanka booliska sanadihii hore.
Munaasabad siweyn loo soo qaban qaabiyay oo ay ka soo qayb galeen madax ka tirsan dowlada Soomaaliya ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ay garbihiisa taagnaayeen wasiirka arimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa wuxuu salaam ka qaatay ku dhowaad 2000-(Labo kun) oo askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Tirada ciidamada iyo dhoolo tusyada ay sameeyeen ayaa saraakiisha ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxay ku tilmaameen in sanadkaan wuu wax badan ka duwanaa sanadadii hore.
Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed Shariif Sheekhunaa Maye oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay sanadkiin yihiin kuwo dhisan oo la ogyahay meelaha ay joogaan iyo howlaha ay haayeen
Wasiirka Arimaha gudaha iyo Amniga Qaranka Soomaaliya C/kariin Xeen oo asna ka hadlay munaasabada ayaa sheegay in wasaaradiisa ay wado qorshe cad oo ku wajahan ciidanka Booliska Soomaaliyeed kaas oo la doonayo in ay ku dhaqmaan ciidanka Amaanka ee booliska.
Raysal Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon ayaa amray in ciidanka Booliska Soomaaliyeed dhamaantood la siiyo min hal bil oo musharaar dheeri ah, taasi oo raysal wasaaruhu uu ku tilmaamay dhiiragalin oo ugu talagalay ciidamada Booliska.
Sargaal ka tirsan Booliska oo la hadlay Keydmedia ayaa sheegay in sanadkaan munasabada xuska ciidanka Booliska Soomaaliyeed ay ka duwaneed sanadadii hore markii loo eego amaanka iyo waliba sida ay u diyaarsanaayeen ciidanka.
Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa waxaa la aas aasay sanadii 1943-dii waxaana haatan ka soo wareegtay 69-sano, waxaana ciidanka booliska Soomaaliyeed ay soo mareen marxalado kala duwan.